प्रधानमन्त्री ओलीको चलाखी : भिराउँदैछन् रक्षामन्त्रीको बिल्ला ! « Ok Janata Newsportal
प्रधानमन्त्री ओलीको चलाखी : भिराउँदैछन् रक्षामन्त्रीको बिल्ला !
काठमाडौं । यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीचको ग्राफ बढ्दै गएको छ । नेकपा दुई पक्षमा विभाजित छ, दाहाल–नेपाल पक्ष र ओली पक्ष । एकले अर्कोलाई कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोपमा दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय दुवै पक्षले फरक–फरक रुपमा भेला, समारोह, गोष्ठि गरिरहेका छन् । नेता कार्यकर्तालाई आफू पट्टी आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बाड्नेदेखि केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने हत्कण्डा अपनाएका छन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको बिस्तार गर्दै १५०० बढी पुर्याएका छन् ।
यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल पक्ष अलग्गिसकेपछि केही मन्त्रालय खाली राखेर केन्द्रको राजनीतिमा पकड जमाउन खोजेका छन् । यतिबेला दाहाल–नेपाल पक्षबाट केन्द्रीय नेताको इन्ट्री ओली पक्षमा भयो भने रक्षामन्त्री पक्का देखिन्छ । तर, ती नेताको छबि र उसले पार्ने प्रभावमा ओलीले निर्णय गर्लान् ।
अहिले बीचमा देखिएका नेकपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग प्रधानमन्त्री ओलीको नियमित संवाद, सम्पर्क भइरहेको स्रोत बताउँछ । यतिमात्र होइन नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका केही नेताले बामदेव गौतम बीचमा बसेर नेता, कार्यकर्ताहरुलाई ओली पक्षमा पठाइरहेको आरोप समेत लगाए । तर, यो कुरा गौतमले स्वीकारेका छैनन् ।
गौतम आफ्नो संगठन देशव्यापी रुपमा निर्माण गर्ने र फरक ढंगले लाग्ने मनस्थितिमा छन् तर, ओलीको दबाब र माहोललाई पनि नियाली रहेका छन् । गौतम पत्नी ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यमा छिन् । गौतम पत्नीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपनि त्यो भएको छैन ।
गौतमले भने आफूलाई विवादमा नल्याउन आग्रह गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएका अन्तर्वातामा पनि आफूले दाहाल–नेपाल पक्षलाई नै समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् । तर, पुनः अभिव्यक्ति फेर्दै दुवै पक्षको गल्ती रहेको पनि बताएका छन् । यसरी हेर्दा गौतम अवसर कुरिरहेका छन् की साच्चै एकताको पक्षधर हुन् त्यो केही समयपछि छर्लङ्ग हुनेछ ।
यतिबेलाको समय नेकपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमकै पक्षमा छ । नेकपाको विवाद सुल्झ्याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने जनाइसकेको छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई दिएर नेकपा आफू बलियो मन्त्रालय लिन र त्यसमा हक्की सक्षम व्यक्ति पठाउन चाहान्छ तीमध्ये पहिलो नम्बरमा बामदेव नै हुन् ।
नेपाली कांग्रेस पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा सरकारमै रहेर निर्वाचन गराउन चाहान्छ । यसरी हेर्दा नेकपा पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीत रहने र कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ ।